Time မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ၂၀၁၂ ခုအတွင်းအကောင်းဆုံးတည်ထွင်မှု ၂၅ ခု၊ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » Time မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ၂၀၁၂ ခုအတွင်းအကောင်းဆုံးတည်ထွင်မှု ၂၅ ခု၊
Time မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ၂၀၁၂ ခုအတွင်းအကောင်းဆုံးတည်ထွင်မှု ၂၅ ခု၊
Posted by kai on Nov 12, 2012 in Ideas & Plans, Know-How, DIY, News | 31 comments
(1) Indoor Clouds
( ဒတ်ခ်ျအနုပညာရှင်တစ်ဦးထွင်ထားတဲ့ လက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ အခန်းရဲ့ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းစ၊ နဲ့ အလင်းပေး ပုံပေါ်မူတည်ပြီး သေသေချာချာတွက်ချပြီးတဲ့အခါမှာ မြူထုတ်တဲ့စက် နဲ့ လေထဲမှုတ်ထည့် လိုက်ရင်အခုလိုတိမ်တိုက်လေး တစ်ခုအခန်းလယ်မှာပေါ်လာပါတယ်)
(2) The Civilization Starter Kit
( Marcin Jakubowski ဆိုတဲ့ လူ က လယ်ထွန်စက်တခုကို ၆ ရက်အတွင်းရှိတဲ့သံ ထည်တွေ နဲ့ အပြီး တည် ဆောက်ခဲ့ပါတယ်၊ သူ့ က ခေတ်မှီတဲ့ လူဘောင်လောကအတွက် အရေးကြီးတဲ့ စက်ပစ္စည်း ၅၀ ကို ရွေးချယ်ပြီး လူတိုင်းကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတို့အတိုင်းအတာတို့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းတို့ တည်ဆောက်နည်းတို့ ကို လူတိုင်းရယူနိုင်ဖို့အွန်လိုင်းမှာတင်ထားပါတယ်၊စိတ်ဝင်စား သူတွေအောက်က လင့်ခ် မှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်၊)
(3) The Motion-Activated Screwdriver
The sensors found in smart phones and Nintendo Wii controllers have migrated into Black & Decker’s cordless 4v MAX Gyro, billed as the world’s first motion-activated screwdriver. Tilt it right byamere quarter of an inch and it screws clockwise to tighten; left, and it turns counterclockwise—all thanks to an internal gyroscope that senses wrist motions, which are measured byasmall microprocessor that turns those movements into changes in the drill’s speed and direction.
(ဒီ လျပ်စစ်ဝက်အူလှဲ့က သာမာန် ၀က်အူလှဲ့ လိုမဟုတ်ပဲ လှုပ်ရှားမှုပေါ်မူတည်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွင်း မှာ လှုပ်ရှားမှု ကို တိုင်းတာသိရှိနိုင်တဲ့ ဂျိုင်ရိုစကုပ်တခုပါရှိပါတယ်၊ အဲဒီတိုင်းတာမှုတွေ နဲ့ အသုံး ပြုသူ ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်)
Price: 25¢ per bottle (estimated)
Five MIT students and their professor Kripa Varanasi have come up withaway to makeasurface that anything will slide off—from ketchup out of bottles to ice off airplane wings. The plant-based product addsamicroscopic slippery coating to almost any material—glass, ceramic, metal or plastic.
( မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ဘာတခုမှ ကပ်ကျန်မနေစေတဲ့ ကုတ်တင် တမျိုးကို MIT ကျောင်းသား၅ဦးနဲ့ သူတို့ ရဲ့ ပရောဖက်ဆာထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊ ဘယ်မျက်နှာပြင်မျိုးမှာမဆို သုတ်လိမ်းနိုင်ပါတယ်၊)
(5) OraQuick Home HIV Test
( တံတွေး ကို ဂွမ်းလေးနဲ့ သုတ်လိုက်ပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်အတွင်းမှာ ဒီကိရိယာလေးက HIV ရှိမရှိ ဖေါ်ထုတ် ပေးနိုင်ပါတယ်၊)
(6) Eliodomestico Solar Water Distiller
Freelance designer Gabriele Diamanti created this solar-powered distiller for use in coastal areas in the third world that are deprived of freshwater. It is half as expensive and 67% more efficient than existing models, and his hope is that local manufacturers will adopt the open-source design and mass-produce it for local populations.
( နေရဲ့ အပူုကို သုံးပြီး ပေါင်းခံရေ ထုတ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းလေး (အိုး) ဖြစ်ပါတယ်၊ စိတ်ဝင်စားသူတွေ အောက်က လင့်ခ်မှာ ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်၊)
(7) Enable Talk Gloves
( ယူုကရိန်းကျောင်းသား၎ ဦးရဲ့ ဆွံ့ အနားမကြားတဲ့သူတွေအတွက် တည်ထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်၊ လက်အိတ်က ဆွံအနားမကြားသူတွေ သုံးတဲ့ လက်လှုပ်ရှားမှုပေါ်မူတည်ပြီး smart ဖုံးကို text လုပ်ပြီး ဖုံးကနေ text ကို ဖတ်ပြပါတယ်၊ ဆွံ့အနားမကြား သူတွေသုံး တဲ့ လက်ဟန်ခြေဟန်ကို နားမလည်သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Remember Tamagotchi? A new toy from Bandai, the company that gave us that classic virtual pet, goes even further. Download the TechPet app, dock an iPhone in the robotic doggy frame, and turn your phone into the cartoon face ofacanine that’s eager to be fed via touchscreen. This puppy even recognizes gestures and verbal commands via the phone’s camera and microphone.
( iPhone Appကိုဒေါင်းလုပ် ခွေးကလေးရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်မှာဖုံးကို တပ်ဆင်လိုက်ရင် ပုံကအတိုင်း ခွေးလေး တကောင် (မျက်နှာပြားပြား) မွေးလို့ ရပြီဖြစ်တယ်၊ iPhone ရဲ့ ကင်မရာနဲ့မိုက်ကရိုဖုံး ကတဆင့် အဲဒီ စက် ရုပ်ခွေးလေး က သခင့်ရဲ့ မျက်နှာကဲနဲ့ အမိန့် ကို နာခံနိုင်ပါတယ်၊
(9) Nike Flyknit Racer
By knitting thread intoasingle layer to fit around your foot—instead of cutting and sewing together multiple materials—engineers at Nike not only made this sneaker lighter (just 5.6 oz., or 160 g) but also gave itaprecision fit: the weave alternately grips and gives despite the absence of liners or reinforcements. Plus, it’s eco-friendly, with less waste left on the factory floor.
(Nike က ထွင်လိုက်တဲ့ ဖိနပ် က ခါတိုင်းလို ပစ္စည်းတွေကို ဖြတ်တောက် စုပေါင်းချုပ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ပဲ တစ်ပြင်ထဲ ဖြစ်အောင် ယက်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဖိနပ်ကပိုမိုပေါ့ပါး ပြီး ခြေထောက်နဲ့ ပိုပြီး fit ပါတယ်၊ ဖြတ်တောက်မှုတွေနည်းတဲ့အတွက် လေလွင့်မှုလည်းနည်းပါတယ်။)
(10) Self-inflating tires
Price: $200 each (estimated)
As soon as the pressure in these Goodyear tires (which don’t have an official retail price yet) gets too low, they know it. An internal pressure regulator opens to allow air to flow intoapumping tube, and as the wheel turns, the flattened part helps squeeze air from the tube through an inlet valve into the tire. Once the air pressure hits an optimal level, the regulator closes—all without the driver’s realizing anything was wrong.
( Goodyear တာယာ Co. က ထုတ်လုပ်တော့မဲ့ တာယာ တမျိုးဟာ အတွင်းမှာ လေဖိအားနည်းလာပြီကို ချက်ခြင်းသိမှာဖြစ်ပါတယ်၊ တာယာမှာ လေဖိအားနည်းလာရင် တာယာတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဖိအားထိန်းခလုပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီး အတွင်းမှာရှိတဲ့ လေထိုးtube ကို လေဖြည့် ပါတယ်။ ဘီးကလည်နေတော့ အပြင် ဖက်က လေပြား နေတဲ့တာယာက လေထိုး tube ထဲ က လေကို အတွင်း ဖက်ကနြေ ပားေ န တဲ့တာ ယာ ထဲကို ပြန် ဖြည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်၊)
(11) Bounce Imaging
Price: $500 (estimated)
An MIT student and an Army Ranger have come up withaway to provide first responders with the kind of technology elite SEAL teams have. To give firefighters and copsafull picture ofaburning building orahostage situation, the baseball-size orb is tossed into the area. Its six cameras snap pictures while its sensors detect air quality, temperature, radiation and other hazards. It then beams the data to mobile devices.
( MIT ကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ စစ်သားတဦးတို့ ပေါင်းပြီးတီထွင်လိုက်တဲ့ဘေ့စ်ဘောအရွယ် ကင်မရာဘောဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီ ဘော ကို အချက်အလက်သိလိုတဲ့ နေရာ ထဲကို ပစ်ထည့်လိုက်ရင် သူ့ ဆီက ကင်မရာ ၆ လုံးနဲ့ ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ ပုံတွေအပြင် အခန်းထဲက အခြားအရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက် data တွေကို လက်ကိုင်ကိရိယာတွေဆီပို့ ပေးလို့ ရပါတယ်၊)
(12) Body Armor for Women
Women are not small men. Finally realizing this, the U.S. military is testing body armor designed expressly forawoman’s body. Current designs are too loose and too long, leaving gaps that might make some women more vulnerable to bullets and shrapnel. Evenamen’s extra-small is too big for 85% of female troops. The 101st Airborne Division’s 1st Brigade will test the new armor during an upcoming deployment to Afghanistan.
( US စစ်တပ်မှာ အခုတော့ အမျိုးသမီး စစ်သည်တွေအတွက် သီးသန်းစစ်ဝတ်စုံကို စတင် စမ်းသတ် ဖို့ထုတ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊)
(13) Sony RX100 Digital Camera
Digital cameras have been getting smaller and more capable every year, but that trend tookahuge leap forward in 2012 with the Sony RX100, which bridges the gap between point-and-shoots and pro-quality digital SLRs. Sony’s innovative design and 1-in. (2.5 cm) sensor allow the camera to take flawless photos even though it’s 20% slimmer than your average digital SLR—small enough to fit in your pocket.
(ဒီဂျစ်တယ် ကင်မလာတွေ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် သေးငယ်လာပြီးပိုကောင်းလာပါတယ်၊ ဒီနှစ်မှာ ဆိုနီ ရဲ့ RX100 ကင်မရာမှာ ရှိတဲ့ တစ်လက်မအရွယ် sensor က လုံးဝ ချို့ယွင်းချက်ကင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံ ကိုရိုက်ယူစေ နိုင်တဲ့ အပြင် ကင်မရာက လက်ရှိ ဒီဂျစ်တယ် SLR ကင်မရာတွေထက် ၅ ပုံ ၁ ပုံ ပိုငယ် လို့အကျီင်္အိတ်တွေထဲ မှာတောင်ထည့် ထားလို့ ရတယ်လို ဆိုတယ်၊)
(14) Wingsuit Racing
Price: $600–$2,000 per wingsuit
Flying humans wearing batlike suits competed in October in the first ever Wingsuit Flying World Championship in China. Participants descended from 5,000-ft. (1,500 m) cliffs, glided throughavalley course and eventually parachuted down, covering about 3⁄4 ofamile (more thanakilometer) in about 30 seconds. The winner: South African Julian Boulle—one of just 20 people currently qualified to compete—who finished in 23.41 sec.,aworld record.
( အောက်တိုဘာလတုံးက တရုပ်ပြည်မှာ လူ ၂၀ လောက် ပေ ၅၀၀၀ မြင့်တဲ့ ချောက်ကမ်းပါး ပေါ်ကနေ လင်းနို့ ငှက်လို လေဟုန်စီးပြီး မြေပြင်ပေါ်ကို (အဆုံးသတ်မှာ လေထီးကို အသုံးပြုရပါတယ်.) ဆင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲ
ကို လုပ်ခဲ့ ရာမှာ ပုံမှာတွေတဲ့ လင်းနို့ ဝတ်စုံ တွေကို ၀တ်ပြီး ပြိုင်ရပါတယ်
(15) Google Glass
( မျက်မှန်ကိုင်းထဲ မှာ ကွန်ပြူတာ တပ်ထားတဲ့ မျက်မှန် ဖြစ်ပါတယ်၊ ညာဖက်မှာ လက်မ၀က်အရွယ် display ပေါ်မှာ ကနေ့ ကွန်ပြူတာနဲ့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်၊ ၂၀၁၄ မှာမှ ၀ယ်ယူနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊)
(16) The MakerBot Replicator 2
Download or createadesign, hit Print, and watch as this sleek, desktop-size 3-D printer extrudes ultra-thin plastic layers, each melting into the one below to create an object—or, if you want, hundreds of copies of it. The latest model from Brooklyn-based MakerBot prints bigger, faster and more precisely than its predecessor. And with more-intuitive software and no assembly required, the upgraded Replicator means that anyone’s home can becomeamini factory.
( 3D printer လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်၊ ပလပ်စတစ်လို ပစ္စည်းထုထည်ကြမ်း ကို ကွန်ပြူတာက ဆော့ဖ်ဝဲ နဲ့ ထိမ်းချုပ်ပြီး လိုချင်တဲ့ ပုံပေါ်အောင် အပေါ်ကနေတဖြည်းဖြည်း ပတ်ပတ်လည် ပန်းပု ထုသလို ပုံဖေါ် တာဖြစ်ပါတယ်၊)
Conventional industrial robots are scary behemoths, but Baxter isanew breed. The latest brainchild of celebrity roboticist Rodney Brooks, who helped invent the Roomba, Baxter is built for light repetitive tasks like packing and sorting. And it’s cheap enough and user-friendly enough—look at that face—for small outfits that otherwise couldn’t affordarobot worker.
(စက်ရုပ်လုပ်သား အဖြစ် အသုံးပြု ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ စက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ )
(18) The Switchblade Drone
Price: $40,000–$150,000 (estimated)
At2ft. in length and weighing6lb. (60 cm, 2.7 kg), the Switchblade drone can be carried into battle inabackpack. It’sakamikaze: the person controlling it usesareal-time video feed from the drone to crash it intoaprecise target—say,asniper. Its tiny warhead detonates on impact. In effect, it makes fighters in the field their own air support.
(အရှည်၂ပေ၊အလေးချိန် ၆ပေါင်သာရှိလို့ ကျောပိုးအိတ်ထဲထည့်သွားလို့ ရပါတယ်၊ ဒီခေါက်လို့ရတဲ့ မောင်း သူမဲ့ လေယာဉ်လေးကို တိကျတဲ့ ပစ်မှတ်ကို တိုက်ဖို့ ထွင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်၊)
(19) The Tesla Model S
This electric four-door sedan has the lines ofaJaguar, the ability to zip for 265 miles (426 km) on one charge—that’s the equivalent of 89 m.p.g. (2.6 L/100 km)—and touchscreen controls for everything from GPS navigation to adjusting the suspension. Tesla is buildinganetwork of supercharger stations—six are open so far—so owners aren’t tethered to their home port.
( Tesla ကားကုမ္မဏီ က ထုတ်လုပ်တဲ့ လျှပ်စစ်နဲ့ မောင်းတဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်၊ တစ်ခါအားသွင်းလိုက်ရင် ၂၆၅ မိုင်လောက်မောင်းလို့ ရပါတယ်၊ ကားအကြောင်း ပိုသိချင်ရင်အောက်ကလင့်ခ် ကို သွားနိုင်ပါတယ်၊)
(20) A Drifting Fish Farm
Price: $750,000 (estimated)
(Sushi အတွက်ငါးမွေးနည်းတမျိုးဖြစ်ပါတယ်၊ ပေ ၁၀၀လောက်ကြီးတဲ့ သတ္တုဇကာ လုံးထဲမှာ ငါးပေါက်စတွေ ကို ထည့်ပြီး သမုဒ္ဒရာနက်အောက်မှာသဘာဝအတိုင်း ရွေ့မျောစေခြင်းအားဖြင့် ခါတိုင်း မွေးမြူတာနဲ့ စာရင် အကောင်ကြီးတာ ၂ဆပိုမြန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ ဒီ မွေးမြူရေးဇကာလုံးတွေ ကို တော့ GPS နဲ့ လိုက်ကြည့်နေရတာပေါ့ ၊ )
(21) NASA’s Z-1 Space Suit
The biggest thing NASA’s first space suits had to do—aside from keep astronauts alive—was to look spacey. So ordinary test-pilot suits were simply redesigned inanifty silver. Things are harder now as the U.S. prepares for new deep-space missions. The Z-1 space suit provides go-anywhere garb featuring more-flexible joints, radiation protection for long stays in space andahatch on the back that allows the suit to dock withaportal onaspacecraft or rover so an astronaut can crawl through without letting dust in or air out.
( နာဆာရဲ့ နောက်ဆုံး အာကာသ၀တ်စုံ – မော်ဒယ် Z-1 ကပိုပြီး ကောက်လို့ ကွေးလို့ ကောင်းပါတယ်၊ အန္တရယ်ရှိတဲ့ ရောင်ခြည်တွေကလည်း ပိုမိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ၀တ်စုံရဲ့ အနောက်မှာ တံခါး လို အပေါက် ပါရှိလို့အာကာသယာဉ်ဖြစ်ဖြစ် ဂြိုလ်ပေါ်သွားယာဉ်တွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် တို့ နဲ့ အချိတ်အဆက် လုပ်နိုင် ပြီး အာကာသ၀တ်စုံ ကနေ ယာဉ်ထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်တာမို့ ဖုန်ဝင်မှာတို့ လေတွေထွက် သွားမှာတို့ ကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါ)
(22) Element 113
After nine years of work,ateam led by Kosuke Morita at the RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science in Japan has created three atoms of the highly unstable superheavy element 113. As yet nameless, it has an enormous nucleus containing 113 protons and 165 neutrons.
( ဓါဒုဗေဒ ပညာရှင်မဟုတ်လို့ ဒီ element 113 အကြောင်းကို မရှင်းပြနိုင်ပါ၊ ပို မို ဖတ်ချင်ရင်တော့ အောက် ကလင့်ခ်ကို သွားနိုင်ပါတယ်၊
(23) The Deepsea Challenger Submarine
Better known as the submarine designed by filmmaker James Cameron, the 12ton, 24-ft.-long (7.3 m) Deepsea Challenger reached the oceans’ deepest point—about7miles (11 km) below the surface—in the western Pacific in March. Built to withstand 1,000 atmospheres of pressure (or three SUVs sitting on your toe), the sub is equipped with digital 3-D cameras and structured withavertical axis meant to accelerate its descent.
(ကမ္ဘာ့အနက်ဆုံးနေရာ (ရေမျက်နှာပြင်ရဲ့ အောက် ၇မိုင်အနက်) အထိဆင်းနိုင်တဲ့ ရေငုတ်သင်္ဘောေ လး
ဖြစ်ပါတယ်၊ ၂၄ပေရှည်ပြီး ၁၂တန်လေးပါတယ်၊ ရေနက်ကို ဆင်းတဲ့အခါ ပို မြန်အောင် ဒေါင်လိုက်အရှည် လိုက်ကိုယ်ထည်ကို တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်၊)
(24) Bahar Towers
Price: $245 million
In Abu Dhabi, where temperatures peak at well over 100°F (38°C), keeping buildings cool isachallenge. Al Bahar Towers featureafacade with intricately designed shades that open and close in response to the sun, reducing heat gain by more than 50%. Using less air-conditioning helps reduce the towers’ carbon emissions by an estimated 1,750 tons per year.
(အဘူဒါဘီ ကမိုးမျှော် အဆောက်အဦ ကို ဒေသက အလွန်ပူတဲ့ အပူချိန်ကို အဆောက်အဦထဲမှာ လျော့ချ နိုင်ဖို့ လိုသလို ဖွင့်နိုင်ပတ်နိုင်တဲ့ မျက်နှာစာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားလို့လေအေး စနစ်အ သုံး ကို လျော့နည်း စေပါ တယ်၊)
(25) The Curiosity Rover
Price: $2.5 billion
NASA had visited Mars but never like this. Curiosity, which landed in Gale Crater in August, isa1-ton, SUV-size Mars car with more scientific instrumentation—10 times as much, by weight—than ever sent to the Red Planet before. But it was how it got there that really made the machine sublimely cool: the rover was lowered to the ground on cables byahovering capsule, touching down balletically in preparation for two years of exploration.
(နာဆာရဲ့ Mars ဂြိုလ်ပေါ်သွား စက်ရုပ်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်၊ အလေးချိန် ၁ တန်ရှိပြီး အရင်က စက်ရုပ် ယာဉ်တွေ ထက် တိုင်းတာရေးကိရိယာတွေပိုတပ်ထားပါတယ်၊ )
(November 12, 2012 | Vol. 180 No. 20 issue)
မှတ်ချက်။ ။ အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့လာသော http://presidentutheinsein.blogspot.com/2012/11/time.html မှတိုက်ရိုက်ကူးယူပါသည်။
(4) LiquiGlide ကိုသဘောကျပါတယ် ။
ပုဂံ မှာပါသုတ် နိုင်ရင် ၊ ထမင်းစားပြီး ပုဂံ ဆေးစရာ မလိုဘူးပေါ့ ။
ကြည့်ရတာ ထမင်းစားပြီးတိုင်း ပုဂံ ဆေး တာဝန်ကျတယ် ထင်ပါ့။
အဲဒီ ကိစ္စကို အတော်လေး စိတ်နာကျည်း နေပုံရတယ်။
သင်းဘောကြီးပေါ်က ဘုရင်ခမျာလဲ ကုန်းပေါ်ကျ … ။
လောလောဆယ် (2) The Civilization Starter Kit တော့ဝယ်လိုက်ပြီ…။နောက်မှစမ်းကြည့်မယ်…။
ဂူးဂဲလ် ကွန်ပူတာ မျက်မှန်းဂျီးတပ်လို့ ….
အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်သွား ယာဉ်ဂျီးစီးလို့ …
မြို့ထဲလောက်သာ တစ်ပတ် ပတ်လိုက်ရလို့ကတော့ကွာ …
အဟင်း .. ဟင်း …
ပုံ၂၄ ထဲက နေကာအပြားတွေအစား ဆိုလာပြားတွေဆို လျှပ်စစ်လဲရမှာပေါ့…..
ပုံ ၁၃ ထဲက ကင်မလာလေးလဲ ဒီဈေးရဲ့ထက်ဝက်လောက်နဲ့ရမယ်ဆို လိုချင်တယ်…
Item (9) က ဖိနပ်စိမ်းစိမ်းလေးကို ကြိုက်တယ်။
နိုက်ကီ ဖိနပ်တွေက ထုတ်လုပ်မှုစားရိတ် ပျမ်းမျှ ဒေါ်လှ ၃၀အောက်ပဲရှိသတဲ့ …
အဲ… ရောင်းဈေးကတော့ ပျမ်းမျှ ဒေါ်လှ ၁၀၀ အောက်မရောင်းနိုင်ဘူး ဆိုပဲ..
ဟိုလူရီးတွေလေဗျာ ..အမှန်လေးခြစ်ပြယုံနဲ့ နိုက်ကီဆိုတာ ကလေးအစ သိအောင်
ဦးနှောက်ဆေးတဲ့ မာကတ္တာဆိုတဲ့ ငတိရီးတွေ…
အဲ့ဘဲတွေကြောင့် ဈေးတွေကြီးကုန်တာ… သေသင့်တယ်..အဲ့ဘဲဒွေ..
Z Z လေး ငြိမ်နေလို့ ရွာထဲဝင်လာတာ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငါ ကြိုက်တယ်အေ။
စကားမစပ် ပန်းသီး ထုတ်ကုန်တွေ တခုမှ မတွေ့ပါလားနော်…
ကျုပ်ကတော့ ဒီအိပ်မက်မက်နေတာ ၁နှစ်ကျော်ပြီဗျ…
(ဒီဗီဒို ကို ကြောင်အဆီပိတ် မတွေ့စေရ..)
” အမှန်လေးခြစ်ပြယုံနဲ့ နိုက်ကီဆိုတာ ကလေးအစ သိအောင် ”
ဟုတ်ပါ့ ။ အဘ လည်း ဥရောပ မသွားခင် ဖိနပ်ကောင်းတစ်ရံ ဝယ်ဖို့သွားတာ ။
ဆိုင်ထဲမှာ အမျိုးစုံ အရောင်စုံ ဘာဝယ်ရမှန်း မသိတာနှင့် ၊
Nike ပဲ ဝယ်လာခဲ့တယ် ။
Nike ရဲ့ Brand Image တစ်ခုတည်း ကြောင့် မဟုတ်ဘူး ကွယ့် ။
USA ရဲ့ Brand Image ကြောင့်လဲပါတယ် ။
ဒါပေသိ၊ ၂၀၁၉ ဆိုတော့ နာ့ သားသား မီးမီးလေးဒွေ ခေတ်ရောက်ပြီပေါ့ဟယ်။
သဂျီးအကြိုက် မိန်းမအတု စက်ရုပ်ကို ဘာကြောင့်မရွေးတာလည်း သိဝူးနော်…။
အပေါ်မှာ ဂီဂီက.. Microsoft’s Vision For 2019 ယူတုဗီဒီယိုတင်ပေးထားတယ်..
အဲဒီထဲမှာလည်း.. Roxxxy မပါဘူး..
အင့် … အင်တဲလ် ရဲ့အနာဂါတ် စာသင်ခန်း..
လက်ရှိ ဒီဗိုက်ဇ်တွေနဲ့တောင် တော်တော် စမာတ်ဖြစ်တဲ့ စာသင်ခန်းလုပ်လို့ရနေပြီပဲဗျာ..
တာ့ခ်ျစခွင် ထွားထွားကြီး တလုံးနဲ့ သင်ကြား
တပည့်တွေက တက်ဘလက်တွေနဲ့ လက်ချာလိုက်..
နုတ်စ် ဒေါ့ကျူမန့်ကို ကလောက်ကနေရှဲ..
ဗီဒယ်အို နဲ့ အခြား ရက်ဖရန့်စ်လစ်စ်ကို ဖော်ပြ
အိမ်စာကို အဲ့သည့်မှာပဲတင် …
ဂရိတ်ဒင်ပေး- သင်ကြားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျောင်းသားတွေ
တင်သမျှထဲက စုပြီးပေါင်းပြီး အားလုံးထဲက အကောင်းဆုံးတွေ စုပြီး
ဘက်စ်အော့ဖ်သည်ဘက်စ် စာမူအဖြစ် အနှစ်ချုပ် …
(နောက်ထပ် ဂျူနီယာတွေအတွက် အနှစ်တွေချည်းကျန်အောင်..)
အားရင် တေဲးအန်း ရေးအုံးမယ်ဗျာ..
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ အပျော့က တပ်စ်စခရပ်နည်းပညာကို စပြီးတော့ မိတ်ဆက်တယ်ထင်တယ်…
(၅)နှစ်အကြာ… ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ပန်းသီးက အိုင်ဖုန်းပထမဆုံးမျိုးဆက်ကိုထုတ်ပြီး Smart Phone ဆိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ စမတ်ဖုန်းလောကကို Shape လုပ်ခဲ့တယ်…
ပထမမျိုးဆက် အိုင်ဖုန်းထွက်ပြီး (၄)နှစ်အကြာ (၅)နှစ်နီးနီးအချိန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကြမှ အပျော့က အမှတ်(၈) ပြူတင်းပေါက်နဲ့ Touch Screen လောကကို ၀င်လာတယ်…
http://www.youtube.com/watch?v=XiqgmAYrd3c ထဲကစိတ်ကူးယဉ်မှုမျိုးကို အပျော့က ၂၀၁၉ဆိုတော့ နောက်ထပ် (၁၀)နှစ်ပေါင်းပြီး ၂၀၂၉ခုနှစ်လို့ အကြမ်းဖျဉ်း မှတ်ထားလိုက်ကြပါစို့…
ဒီထဲမှာ ပန်းသီးကိုအခြေခံထားတဲ့ Techpet ဆိုတဲ့အကောင်လေးပါတယ်နော်…
ဂိုဂဲရဲ့ ၂၀၁၄ မှာဝယ်နိုင်မယ့် မျက်မှန်လေးကို ရောင်းအားဘယ်လောက်ရှိမလဲ…
သိပ်လည်း မထင်ပါနဲ့လေ …
ပန်းသီး ဂွမ်းဖူးတာလေးတွေ ..အင့်အင့်..
အဲ့ထဲမှာမှ ..စတိတ်အော့ဖ်မိုင်း စတိဗ်ဂျော့ ကြီး ကိုယ်တော်တိုင် ဂွမ်းထားတာက ၇ခုတိတိတဲ့ခည..
(ဒီစာကို အရီးလတ် မမြင်စေရ…)
တပ်ခ်ျစခရင်မှန်လုပ်တဲ့ဘစ်ဇနက်က.. နောင်အနှစ်၅၀အတွင်း.. အသည်းအသန်ကြီးဖြစ်မယ့်သဘောပေါ့နော..
သဲကလုပ်တာဆိုရင်တော့.. မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသဲတွေ.. လေလံဆွဲသိမ်းထားမှနဲ့တူတယ်..
ဟီဟိ… ဒဲလ် မှ ဒဲလ် ပဲ …
ဒဲလ် မှ ဒဲလ် ပဲဟဲဟဲ..
ပန်းသီးထက် အပုံရီး သာပါတယ် …
နံပါတ်၁၅ ဂူးဂဲမျက်မှန် ကို မြင်တော့
၁၉၉၈-၉၉ လောက်က မှတ်တယ် ။ မြဝတီကလွှင့်သွားတဲ့ fortune hunter series ကို ပြန်သတိရမိတယ်
မင်းသား မျက်လုံးမှာ တပ်ထားတဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကနေ ၊ သူ့ ပါတနာဆီကို ပုံရိပ်တွေအကုန်ပြန်ပို့ ပေးပြီး ၊ လမ်းညွှန်ချက်ကို လှမ်းမေးတာ။
တိမ်မည်း (ခရီးသွားနေည်) says:
စက်ရုပ်တွေ စစ်တပ်ဖွဲ့ ရင် စက်ရုပ်ဖတ်ကပါဖို့စာရင်းပေးရန်အသင့်…………..
စကားမစပ် အူးလေး တို့ရေ …
IE-10 is now available for Windows7!!!
Pretty Cool !!!!
ပန်းသီးကိုက်သူတွေ မခံစားတတ်မယ့် ဆိုင်းယန့်စ် နဲ့ အာ့ထ် သမထားတဲ့အရာ..
Science & Art ကို ရောထားတဲ့ကိစ္စမှာ… ဆက်လက်လေ့လာစောင့်ကြည့်ချင်ပါတယ်…
2012 Innovation တွေထဲမှာ သိပ်ချစ်စာကောင်းတဲ့ ဆီရီ ကို ဘာလို့
ဆီရီကို တီထွင်ပြီးသား Voice Command ရဲ့ Upgraded version လို့ သတ်မှတ်ထားလို့
နောက်တစ်ခုက ထူးထူးခြားခြားတီထွင်ဆန်းသစ်မှုမဟုတ်ပဲ… အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုမို့ပါ…
အကုန်ကြိုက်တော့ ဘာရွေးရမှန်းမသိတော့ဘူး သဂျီးရေ
မျက်မှန်လေးတော့ လိုချင်သား (အလကားရရင်ပေါ့လေ)
HIV စစ်တာအဲ့လောက်တောင် လွယ်နေပြီ်လား ။ဒီဘယ်တော့ ရောက်မယ် မသိဘူး။ အဖျားတိုင်းသလိုကို လွယ်လာလိုက်တာ အံ့ရော။
ငါးဖမ်းတဲ့ အလုံးကြီးက မတော် သင်္ဘောတွေ ဘာတွေနဲ့ တိုက်မိရင် လုပ်ထားသမျှ အလကားဖြစ်နေအုန်းတော့မယ်။
Nike ဖိနပ်လေးက လှလိုက်တာ အစိမ်းရောင်က ဖေးဖရိတ်ဆိုတော့ ပိုကြိုက်တယ်။
ဒေါ်လှ လေးဆယ်တန် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ တက်စ်နဲ့ လူနာတေကို အခမဲ့စစ်ဆေးပေးဖို့တော့
နောင် ဆယ်နှစ် ဆယ်နှစ် လို့အော်ရင်တောင် ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်
အကြိုက်ဆုံးကတော့ civilization starter kit ဘဲ၊။ တောင်သူလယ်များအူးကြီးမား ကိုနည်းပညာဖြန့်ဝေပီး
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအပြည့်အစုံ ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ရရင်တော့လား ……. အော် ဒါလဲ ဆယ်နှစ် ဆယ်နှစ်လို့ အော်ရပြန်အုံးမှာပါဘဲ